မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် NLD က ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် နှုတ်ထွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ခုံရုံးသည် ယခုထိတိုင် ထိုအခြေအနေမှ ရုန်းထွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့သော် NLD ပါတီသည် လွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေး ပြန်လည်ရရှိရန်နှင့် ၎င်း၏အာဏာကို ပြန်လည ်ထူထောင်ရန်.
Htin Kyaw Aye ရေးသားသည်။
ခေတ်မီ မျိုးချစ်တပ်မတော်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နေဟု တပ်မတော်အကြီးအကဲ ပြောကြား
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ခေတ်မီတပ်မတော်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရေးသည် ယနေ့ခေတ်ကာလ၏ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြောကြားသည်။
အခြေခံပညာကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ချက်များကို ဝန်နှင့်အားမျှတအောင် ချင့်ချိန်ဆောင်ရွက်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံပညာကဏ္ဍတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့်အချက်များကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း အားလုံးပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေသေးသောကြောင့် ဝန်နှင့်အား မျှတမှုကို ချင့်ချိန်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဘောင်အတွင်းမှ အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးဧရိယာ လေးပုံတစ်ပုံခန့် ကျဆင်းသွား
ဘိန်းဝယ်လိုအား လျော့နည်းလာပြီး စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးသည့်ဧရိယာမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်း လေးပုံတစ်ပုံ ကျဆင်းသွားသည်ဟု ထုတ်ပြန်သည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆောင်ရွက်မှုက ရခိုင်အရေးကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်ဟု တရုတ်သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ရိုဟင်ဂျာအကြပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ၏ ဆောင်ရွက်မှုသည် “တင်းမာမှုများကို ပြေလျော့စေမည် မဟုတ်သလို ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်” ဟု တရုတ်နိုင်ငံက ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ်မကုန်မီ ဒေသ ၅၀ သို့ 4G/LTE ကွန်ရက် တိုးချဲ့ရန် တယ်လီနော ရည်မှန်းထား
ယခုနှစ်ကုန်မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကနေရာဒေသပေါင်း ၅၀ သို့ 4G/LTE ကွန်ရက်ကို တိုးချဲ့သွားရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု တယ်လီနောမြန်မာက ပြောကြားသည်။ “သုံးစွဲသူတွေ သူတို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို သုံးစွဲနေကြချိန်မှာ အကောင်းဆုံး သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိနေစေဖို့ တယ်လီနောအနေနဲ့ အမြဲတစ်စေ ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အင်တာနက်ဒေတာ.
Episode 8: မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေး
မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးအတွက် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်လဲ
ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်များ ထပ်မံတွေ့ရှိ
ရေစိုနေသည့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ၁၀၀ ကျော်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကန်တော်ကြီး ပန်းခြံအတွင်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပြည်ပမှ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ တွေ့ဆုံမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားကုန်သည် ၃၅၀ ကျော်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် မကြာမီ ကျင်းပမည့် ပြပွဲသို့တက်ရောက်ကာ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်သည်။